mihazakazaka lola mihazakazaka casino-toerana
annuler une commande geant casino fiara
annuler une commande casino fiara
ano ang ibig sabihin ng filokana
Fitifirana Kintana, izay ihany koa ny manokana sy miasa ny Fitifirana Kintana Casino ao Mahnomen mikasa ny hanorina casino iray hafa akaikin'ny Bagley in Clearwater County izay tokony hanokatra ao amin'ny lohataona mihazakazaka izany indroa poker tetika. Ny fanambarana efa nihaona tamin'ny mpanohitra avy ireo mponina sasany izay manahy ny mety ho voka-dratsy nitombo ny fifamoivoizana dia tsy maintsy amin'ny Kintana Lake, sy ny faritra ny tontolo iainana ahitana ny ankamaroany ny fianakaviana nanana ny resort sy ny vanim-potoana lake cabins mihazakazaka lola mihazakazaka casino-toerana.
Na izany aza, araka ny Inforum tatitra vao haingana ny fivarotana ny 218-acre taratasy mivalona tamin'ny volana jolay ary 12 metatra toradroa tetika vidina amin'ity volana ity dia akaikin'ny 15 ny velaran-tany fa ny governemanta federaly dia fitandremana ao matoky ny foko. Raha milalao ampy tsy afaka mahazo maimaim-poana ny efitra sy ny bord annuler une commande geant casino fiara. "Isika tsara tarehy be ny fahalalana ny farihy, ary tsy manana na inona na inona ireo olana ireo ary tsy te-misy." Mindemann nametra-panontaniana ihany koa ny fandresen-dahatra ny fanapahan-kevitra ny hametraka ny casino any amin'ny faritra lavitra toerana tsy ampy ny lalana foto-drafitrasa, araka ny tatitra amin'ny inforum.
Momba ny fiantraikany eo amin'ny farihy ny tontolo iainana avy mavesatra sambo fifamoivoizana, Kintana Lake Kaominina mpikambana Birao Lee Mindemann hoy, "iray Hafa 100 na 200 sambo ity farihy fotsiny mampitombo na exaggerates ny mety ho antsika mba hahazo invasive karazam-biby toy ny zebra atala," hoy izy annuler une commande casino fiara. Drafitra ho an'ny Kintana casino Lake ahitana lalao latabatra sy ny slot milina amin'ny ballroom buffet sy ny fisotroana, ny fanomezana ny toeram-pivarotana, deli, trano fandraisam-bahiny, ary ny RV park ano ang ibig sabihin ng filokana.